Garaadso Intaadan Guursan (Q- 1aad) WQ. Mubarak HadiHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Garaadso Intaadan Guursan (Q- 1aad) WQ. Mubarak Hadi
W/Q: Mubarak Mahamud Saleban (Mubarak Hadi)
Oo go’aanka aad damacsantahay lala gorfeeyaaye” ~ Amiin Sheikh Maxamed
Maxaa la’iiga baahanyahay inaan noqdo inta aanan raadin qof wanaagsan
Diin ku dooro: Gabadha diinta lihi waa tan garanaysa siday u gudan lahayd xaqa uu ninkeedu ku leeyahay, siday u dhawri lahayd asraarta gurigeeda iyo nafteeda, carruurtana ugu barbaarin lahayd tubta toosan. Run ahaantii nin nasiib leh ayaa hela gabadh diin leh. Gabadha diinta leh waa furaha nolosha. Waa qof adduunyadaada iyo aakhiradaadaba kuugu kaalmeyneysa wanaaga. Lammaanahaaga ha ku qiimeyn qurux keliya, ha ku xulan xoolo keliya, ha ku raacin reer keliya, ee ku dooro diin. Hadduu Ilaahay ku siiyo gabadh diinna leh, quruxna leh waa mahad Alle, haddii aad hesho gabadh diinna leh, xoolana leh waa mahad Alle, haddii aad hesho gabadh diinna leh, reer magac lehna ka dhalatay waa mahad Alle, laakiin diintu hakuu noqoto shuruudahaaga midda ugu horreysa ee aad wax ku doorato, kedibna wuxuu Ilaahay kuu raaciyo diin wanaageeda oo nasab, maal, iyo qurux ahna, ay kuu tahay nimco dheeraad ah. Gabadh diin leh marka hore raadi, iyadaa laga helaa nolosha raaxadeeda. Xadiis uu Abdullaahi ibn Cumar Ibn Caas warinayo buu nabiga (csw) ku leeyahay;
AKHLAAQ IYO DHAQAN WANAAG KU DOORO: Waxaan joognaa xilli dhaqankii wanaagsanaa uu sii gabaabsi yahay, xili akhlaaqdii suubaneyd ay god madow kusii aroorayso, xilli xishoodkii iyo xayadii lakala dhaqaaqay. Waa lagama maarmaan inaad akhlaaqda iyo dhaqankeeda ka eegto gabadhaad guursaneyso. Umaduhu waxay ku dhisanyihiin akhlaaq iyo qiyam, haddey akhlaaq iyo beelaan qiyam way burburaan, Xadiis uu warinayo Abu Saciid Al Khudriy oo uu ka warinayo Nabigu CSW wuxuu inoo tilmaamayaa;
DABEECAD WANAAG KU DOORO: Dabeecaddu waa muhiim. Waa muhiim ineey labada qofi isku dabeecad yihiin, dad is fahmaya oo nolosha isku si u arkaya yihiin. Dabeecaddu waa qeyb ka mid ah is fahanka, labada qof. Haddey labada qof is dabeecad fahmaan waxaa hubaal ah ineey nolosha inteeda kalena isku fahmayaan, haddiise labada qof dad is dabeecad fahmaya eysan aheyn waxaa hubaal ah inuu gurigaa ku dambeynayo burbur iyo kala haad.
Iska fiiri qoyska ay gabadha ka dhalatay, hooyadeed, aabbeheed, walaaleheed iyo wiliba saaxiibadeedba, sababtoo ah dadku waxeey isku yeeshaan saameyn aad u ballaadhan.
Ogow ninkasta wuu awoodaa inuu xaas guursado oo caruur dhalo, laakiin nin kasta ma awoodo inuu xaaskaas iyo caruurtaas mas’uuliyadooda qaado
Haku dheeraan mudada aad gabadha wada sheekeysanysaan. Inta badan waxaa dhacda in muddo intii la wada sheekeysto, oo xiisuhu dhammaado, kadibna la kala dhaqaaqo.
Haddaad rabtid inaad waddamada reer galbeedka ku dhex guursatid, guurso gabar ay u joogaan hooyo, aabbe iyo wiilal la dhashay, kuwaasoo bulshada dhexdeeda ka maamuusan, ku leh magac iyo mansabba. Sababtoo ah dhulkaad joogtid waa dhul dhib badan, waa dhul dumarka awood loo siiyay sidii iney iyagu ninka furi karaan oo kale, taas oo sababtay shacbiyadda reer galbeedka, furriinku inuu ka marayo 60% (Boolkiiba lixdan). Nasiib xumo waxaa dhacday dumarkii muslimaadka ahaa markey dhulalka reer galbeedka yimaadeen iney iyaguna is bedalaan, oo dhaqankaa ku qancaan qayb yar, oo Ilaahay u naxariistay mooyaane. Sidaa daraadeed waa gaashaan inaad guursatid gabadh hooyadeed, aabbaheed iyo walaalkeed oo weliba bulshada sumcad ku leh, inaad guursatid.
Gabadha aad guursaneysid iyo adiga dhexdiina ku abuur geed hadh weyn oo kalsooni la yiraahdo.
Haka welwelin waxaad siin lahayd iyo waxaad ku dhisan laheyd reerka marba haddaad tahay qof raba inuu dhameystiro qeyb diintiisa ka mid ah, waayo Rabbi baa kaa kafaalo qaaday. Xadiith Abaa Hureyra (RA) uu warinayo oo xassan ah buu nabigu (SAW) ku leeyahay ;
Gabadhaad guursaneyso iska fiiri, ma haweenkii horee wanaagsanaa bey waddadoodii heysaa mise kuwan maanta jooga ee nolosha xaqiiqadeeda ka leexday bey jidkooda haysaa. Waxaa la yiri berigii hore, saddex baa dumarka loo guursanjiray, saddex baa beddashay, saddex baase bi’iyay.
Saddex baa dumarka loo guursan jiray: (Waa saddexdda aan rabo inaad lammaanahaga ku dooratid)
Waxaa beddalay saddex: (Sadexdaana waa saddexdda aan rabo inaad kaga carartid)
Inta aadan guursan ka istakhaareyso gabadhaad rabto inaad guursato. Hadda kuma lihi adoon dedaalkaagii gudan Ilaah iska talo saaro, oo istakhaareyso, maya maya! Istakhaarada iyo talo saarashada Rabbi waxaa lala yimaadaa markaad adigu marka hore inta awoodaada ah dedaasho, oo aad la timaadid dhaq-dhaqaaqii lagaaga baahnaa.
Ugu dambeyntii waxaan ku leeyahay gurigaaga ha ku aasaasin wax uusan Alle raalli ka aheyn, sida inaad meelo ragga iyo dumarka kuwada kulmaan oo lagu heeso kireyso. Arooskaagu waa inuu noqdaa aroos dad muslim ah leeyihiin, guri muslim ah lagu aasaasayo, la rabo in gurigaa naxariista Rabbi ay asiibto. Si uu u noqdo gurigiinu guri aad nolol raaxo leh kuwada qaadataan inta noloshiinna ka dhiman, Eebana idin ka dhex abuuro oo idinku arsaaqo ubad aad ku indho qabowsataan.
Losoco Qaybta 2-aad ee Qormada (Qaybtii Gabdhaha)
W/Q: Mubarak Mohamud Suleban (Mubarak Hadi)